कतारमा जुरेको डा. पोखरेललाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बन्ने संयोग - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ कतारमा जुरेको डा. पोखरेललाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बन्ने संयोग
कतारमा जुरेको डा. पोखरेललाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बन्ने संयोग
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ असोज ६ गते, १९:०९ मा प्रकाशित
कतारमा भ्रमणको क्रममा बायाँबाट क्रमसः दोस्रोमा पाेखरेल, तेस्रो मन्त्री यादव र चाैथाेमा डा. उपेन्द्र महतो । तस्वीरः स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक डा. रोशन पोखरेलको फेसबुक
काठमाडौं—स्वास्थ्य सेवा विभागले कर्मचारी सरुवा गर्ने भदौं—असोज महिना थियो । तत्कालीन विभागका महानिर्देशक थिए—डा. गुणराज लोहनी । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले सरुवाको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बनाएर महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्न मात्रै भनेका थिए ।
तर, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दैं डा. लोहनीले मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई थाहै नदिई ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुको सरुवा गरे । आफूलाई बाइपास गरेर त्यत्रो ठूला संख्या सरुवा गरेको भन्दैं उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र त्यही बेला महानिर्देशक परिवर्तनको कसरतमा लागे । तर, सत्ता साझेदार नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डनिकट मानिएका डा. लोहनीलाई हटाउने कुनै गतिलो कारण नै भेटेनन् ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, २६ कात्तिक २०७५ दिन । मन्त्री यादवसहित ५ सदस्सीय भ्रमण दल कतारको दोहा उड्यो । कतार भ्रमणको उद्देश्य थियो—त्यहाँको सरकारले कात्तिक २७ र २८ गते आयोजना गरेको ‘वल्र्ड इनोभेटिभ समिट फर हेल्थ’ । मन्त्रीलाई सो कार्यक्रममा सहभागी गराउने चाजोपाजो भने नेपालकै ठूलो निजी लगानीमा खोलिएको मेडिसिटी अस्पतालका निर्देशक डा. उपेन्द्र महतोले मिलाएका थिए । उनी पनि यादवसँगै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कतार पुगेका थिए ।
भ्रमण दलका अन्य सहभागी थिए—विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल, पाटन अस्पतालका नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. सुदेश सुवेदी र स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ शाखाकी प्रमुख रोशनीलक्ष्मी तुइतुइ ।
एउटै गृहजिल्ला निवासी भएर पनि त्यसअघि सामान्य चिनजानमात्रै भएका मन्त्री यादव र डा. पोखरेललाई नजिकियाउन यो भ्रमण कोशेढुंगा बन्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ११ औं तहका कर्मचारीमध्ये बरिष्ठताको दोस्रो बरियतामा रहेका जिल्लावासी पोखरेल पाएपछि उपेन्द्रले त्यही बेला स्वास्थ्य सेवा विभागको जिम्मेवारी दिने योजना बनाएका थिए । भ्रमण दलका एक सदस्यकाअनुसार डा. पोखरेललाई महानिर्देशक बनाउने मोटामोटी योजना कतारमै बनेको थियो । ‘संयोगले उहाँहरु एकै जिल्लाका पनि हुनुहुँदोरहेछ र डा. पोखरेल बरिष्ठमध्येका पनि हुनुहुँदोरहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल फर्किने बितिकै महानिर्देशक बनाउने मन्त्रीको तयारी थियो । तर, त्यो वातावरण मिलाउनै झण्डै एक वर्ष लाग्यो ।’
एक वर्षसम्म मन्त्रीलाई महानिर्देशक आफूअनुकूल ब्यक्ति ल्याउन के ले रोक्यो त ? मन्त्री यादवले नेपाल फर्किनासाथ डा. लोहनीलाई महानिर्देशकबाट हटाउन नखोजेका होइनन् । तर, मन्त्री यादवका लागि धर्मसंकट के परिदियो भने प्रचण्डले नै उनलाई सरकारमा भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । जबकी, उनले हटाउन खोजेका डिजी पनि प्रचण्ड निटक नै । त्यसैले उनले डा. लोहनी तत्काल हटाउन सकेनन् ।
त्यसपछि सुरु भएको कर्मचारी समायोजनको लफडाले पनि डा. लोहनीलाई कार्यकाल लम्बाउने थप मौका मिल्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ औं तहको समायोजन टुंगो लगाउना साथ मन्त्री यादवले पदस्थापन भटाभट गरे । पदस्थापनाको पहिलो निर्णयमा नै उनले १२ औं तहका एकमात्र प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई विभागको महानिर्देशक बनाउने चलाखीपूर्ण निर्णय गरे । जबकी, १२ औं तह बढुवा भएको डेढ वर्षसम्म मन्त्रालयमै रहेका डा. प्याकुरेललाई अवकास हुन २ महिना बाँकी रहँदा विभाग जान राजी गराए ।
समायोजनपछिको पदस्थापनामा डा. लोहनीलाई विराटरनगरस्थित कोशी अस्पतालको प्रमुख बनाएर पठाइयो । डा. प्याकुरेल विभाग गएसँगै डा. लोहनीलाई यस्तो ठाउँमा पु¥याइयो कि जहाँ डा. पोखरेल प्रमुख थिए । त्यही ठाउँमा डा. लोहनी प्रमुख भए भने डा. पोखरेलले केही समय प्रमुख कन्सल्टेन्टको रुपमा काम गरे ।
सेवा अवधि पूरा भएर विभागबाट डा. प्याकुरेलले विदा लिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन जना विशेषज्ञहरुको महानिर्देशक रुपमा चर्चा थियो । जसमा पहिलो नम्बरमा बरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. भिमसिंह तिंकरी, दोस्रो नम्बरमा कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी विच्छा र तेस्रो नम्बरमा परोपकार प्रसुती गृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम थिए । तर, यी सबैलाई पाखा लगाउँदैं बरियताको दोस्रो नम्बरमा रहेका कोशी अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. पोखरेल अपत्यारिलो रुपमा विभागको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगे ।
मन्त्री यादवले डा. पोखरेल महानिर्देशक बनाएर ‘सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाचिने’ खेल खेलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । तथापि, मन्त्री यादवले बरिष्ठताको आधारमा निर्णय गरेको भए पहिलो बरियतामा रहेका मन्त्रालयको गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई विभागको महानिर्देशक बनाउन सक्थे ।